Wepamusoro Adsense Misoro: Ajax, Flash, WordPress uye Firefox | Martech Zone
Chitatu, December 27, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Mavhiki mashoma apfuura, ini ndakabatanidza Adsense neGoogle Analytics (Zano # 4). Ini ndatova kufarira kutarira mhedzisiro. Google Analytics ine Reverse Goal Path uko iwe kwaunogona kuona iyo nzira iyo vashanyi vanoshandisa usati wadzvanya kushambadza. Wakashongedzerwa neruzivo urwu, mumwe anogona kutora maviri maonero akasiyana:
Ini ndinogona kuita mari yakawanda kana ndikaramba ndichinyora nezve idzi misoro.
Iko kune kudiwa kwemukati mune idzi nzvimbo - zvakanyanya zvekuti vanhu vari kuda kudzvanya pane kushambadza kuti vaiwane!
Ndiine mavhiki mashoma ekuongorora pasi pebhanhire rangu, ini handisi kuzochinja mafambiro pane izvo zvirimo bhurogu rangu kuti ndiwane imwe yekushambadzira mari Asi… zvinoita sekuti vanhu vari kutsvaga yangu blog uye voisiya iyo kuburikidza neshambadziro maisheni kana ivo vasiri kuwana iyo ruzivo rwavanoda kune iwo misoro yavaitsvaga. Heano kutonhorera kutarisisa pamatanho ane Reverse Chinangwa Nzira:
Iyo misoro? Ajax, Flash, WordPress uye Firefox. WordPress ndeimwe yemisoro 'inopisa' pane yangu blog ine yakawanda kurova paWordPress akaiswa maticha kupfuura chero kupi. Ndiri kushanda paWordPress Sidebar Widget izvozvi sezvo izvo zvichidikanwa uye zvinogona kufumura blog rangu kune mamwe maverengi.
Kana iri Ajax, Flash, uye Firefox… Ini ndichafanirwa kuona kwandinoda kutora idzodzi. Ndiri fan hombe yeAjax asi handina yakawanda Flash ruzivo (shamwari yangu Bill ane zvimwe zvakawanda). Uye zvechokwadi ndinoda Firefox, inowedzera-pane teknolojia, uye Firebug! Firebug iri ari chakakosha dhizaini yekuvandudza yeWebhu kuvandudza.
Saka… nyora nezve izvo misoro yekusangana nezvinodiwa uye iwe unogona kuita mari yakawanda kuzviita! Analytics yakanaka!
Mbudzi 13, 2008 na6: 48 PM
Ndine Flash webhusaiti
Ndiri kutsvaga iyo script inoratidza google adsense pane flash.
Mbudzi 17, 2008 na2: 23 PM